Niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia tamin'ny 26 aprily
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia tamin'ny 26 aprily » Page 2
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aprily 17, 2021
Ny fisokafana indray
Manomboka amin'ny 26 aprily, niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia, saingy nisy fiovana tamin'ny lasa. Omena laharam-pahamehana ny hetsika ivelany, manomboka amin'ny fikarakarana sakafo amin'ny latabatra ivelany ho an'ny sakafo atoandro sy sakafo hariva. Ity fanapahan-kevitra ity dia mifototra amin'ny "risika misy antony" avy amin'ny hevitry ny mpahay siansa izay nilaza fa ambany ny mety ho fihanaky ny areti-mifindra any ivelany. Ny fisakafoanana ihany koa dia tsy afaka misokatra ao an-trano ihany rehefa hisakafoanana amin'ny 1 Jona.
Miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo faritra mavo, hisokatra ho azy ireo tranombakoka, raha hisokatra miaraka amin'ny fepetra famerana voafetra napetraky ny komity siantifika teknika kosa ny teatra, sinema ary fampisehoana amin'ny faritra mavo.
Manomboka amin'ny 15 Mey, ny dobo filomanosana any ivelany ihany no afaka manomboka indray ary manomboka amin'ny 1 Jona ireo gym, arahin'ireo foara, kongresy, spaoro ary valan-javaboary.
Any amin'ny faritra mavo sy volomboasary dia hisokatra ny mpanatrika ny sekoly amin'ny ambaratonga rehetra ary ny faritra mena, ny sekoly akanin-jaza ary ny sekoly hatramin'ny kilasy fahenina dia hisokatra. Ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa dia misy ny fomba maodely izay mizara ny lesona amin'ny ampahany ny misy ary ny sasany kosa lavitra.
Ireo fepetra ireo dia ho hita ao anaty fepetra ho avy izay hankatoavin'ny filankevitry ny minisitra, izay hamaritra amin'ny antsipiriany ihany koa ireo lalàna vaovao momba ny fivezivezena ao anatin'ny faritry ny firenena. Araka ny fanazavan'i PM Draghi, azo atao indray ny mihetsika malalaka manelanelana ireo faritra ao amin'ny faritra mavo.
Mba handehanana any amin'ny faritra samy hafa loko dia antenaina hitranga ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto: vaksiny, fanatanterahana fitsapana miiba COVID-ratsy ao anatin'ny vanim-potoana farany teo, na fanarenana avy amin'ny COVID.
Fanohanana ho an'ny toekarena
Miaraka amin'ny elanelam-bola vaovao mitentina 40 miliara sy ny antontan-taratasy ara-toekarena sy ara-bola nankatoavin'ny filankevitry ny minisitra, ny governemanta dia manangana filokana amin'ny fitomboana fa amin'ity taona ity ny fatiantoka ho an'ny daholobe dia ambany 12% fotsiny amin'ny GDP ary hihena tsikelikely mandra-pahatongan'ny miverina ambanin'ny 3% izy io fa tsy alohan'ny 2025.
"Raha ny fitomboana no antenaina," hoy ny fanazavan'i Draghi, "dia mieritreritra izahay fa tsy misy fepetra fanitsiana ilaina amin'ny taona ho avy. Ny fizotrany dia voadika amin'ny fivoahana amin'ny trosa vokatry ny fitomboana. ”
Ho an'ireo olona izay namoy ny zava-drehetra, ny singa iray hafa dia ny fisorohana ny orinasa tsy hikatona noho ny tsy fahampian'ny trosa. Ny sehatra sasany misy fiovan'ny teknolojia dia tsy hanana tsena intsony, noho izany ny tetezamita amin'ireo sehatra hafa manana tsena dia tokony ampiana.
Androany, manjaka ny fanampiana mahaolona, ​​toy ny fidiram-bola maika, ary ny fanampiana ara-barotra. Ohatra, ny famerenana amin'ny laoniny ny vidiny raikitra na ny fampitomboana ny isan'ny VAT izay afaka mahazo fanohanana, izay fepetra tsy misy dikany raha velona ny orinasa.
Amin'ireo dosie misokatra toa an'i Alitalia dia tsara ihany ny trosa raha misy fanavaozana ny orinasa avela hahafahany mandroso miaraka amin'ny elany manokana, ka mizaka tena izy. Raha tsy misy drafitra fandraharahana dia trosa ratsy izany. Amin'ny Stellantis anefa, tsy misokatra ny dosie. Nanazava i Draghi, "Ny lojikan'ireo fitsabahana ireo dia ny fanomezana fanampiana mahaolona." Stellantis NV dia mpamokatra fiara-miasa iraisam-pirenena manana ny foibeny ao Amsterdam, Netherlands, izay natsangan'ny fampiraisana 2021 an'ny Fiat Chrysler Automobiles sy ny PSA Group miorina amin'ny fifanarahana fampiraisana 50-50.
Miaraka amin'ny fidirana an-tsehatra manaraka fanampiana, hamafisina ny fanampiana ireo orinasa sy isa VAT iharan'ny krizy. Hisy ny fepetra handoavana ny vidiny raikitra, toy ny hofan-trano sy ny faktiora ilaina amin'ny asa, ary koa ny fitsabahana mba hanasoavana ny trosa, ny fatiantoka, ny fanemorana ny hetra ary ny famotsorana. Hisy koa loharanom-pahalalana bebe kokoa ho an'ny tanora sy ny tompon'andraikitra eo an-toerana.
Page 2 ny 3 Prev Manaraka